Emva kweminyaka embalwa elubhacweni, iApple TV ibuyela eAmazon | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, iphantse yangqamana nokusungulwa kwesizukulwane sesine i-Apple TV, eyokuqala yokufaka ivenkile yesicelo, isigebenga sentengiso IAmazon yanomsindo ngemananita kuba esi sixhobo sasikhuphisana ne-TV yoMlilo. Ayimfutshane okanye iyonqena, kwaye ibonakalisa inkxaso yayo kurhwebo olukhululekileyo, iAmazon isuse i-Apple TV kwiwebhusayithi yayo. Ukusukela ngoko khange kwenzeke ukuba kubonwe nanye kula maqhinga, nangona kunjalo, izinto ziyatshintsha.
Ekupheleni konyaka ophelileyo, ngequbuliso iAmazon yandise inkonzo yayo yokusasaza ividiyo Ividiyo enkulu yeAmazon ukuya kumakhulu amazwe kwihlabathi liphela. Abakhange bazikhathaze ngokuguqulela usetyenziso oluhambelanayo kwaye, khange bakhawulezise ukwenza usetyenziso lweApple TV ngokungathi benza iNetflix, iHBO nabanye abaninzi. Kodwa ukusukela ngoku le app sele iza kufika, I-Apple TV ayisekho into evaliweyo, kwaye iqala ukuvela kwiishelufa ezibonakalayo zeAmazon.
Ngomdla ndiyakuthanda andres
IAmazon yinkampani kwaye ngenxa yoko iqhutywa yinzuzo. Ayisiyonto imbi, kwaye akufuneki simgwebe ngayo, kodwa ukuzenzisa okuncinci, ngamanye amaxesha, kuyabulelwa.
Umlilo weTV VS Apple TV
Emva kweminyaka embalwa apho iAmazon igcine i-veto kwi-set-top-box eqaliswe ngabo baseCupertino, iApple TV sele iqalile ukuvela kwakhona kwiAmazon, ngakumbi, iApple TV 4K eyaziswa kwihlabathi ngoSeptemba 12 kunye ne-iPhone 8 entsha, i-iPhone X kunye ne-Apple Watch Series 3. Ngokucacileyo, oku kunento yokwenza nokuhleba okukhulayo usetyenziso lwe Amazon Prime Video yeApple TV imalunga nokuqala kwivenkile ye-tvOS. Ngapha koko, ukufika kwakho kunokwenzeka kwangomso.
Njengoko ibonakala, iyanyamalala, kwaye nangona ibonisiwe ngaphandle kwestokhwe, ngoku iApple TV 4K ayisabonakali njalo, nangona isenza neengcebiso zokukhangela. Kwaye kuyacaca ukuba iAmazon ayizukudala iphepha lemveliso ukuba awufuni kuyisebenzisa.
Kwelinye icala, ukumiliselwa kweAmazon Prime Video app inokusondela njengokuba besitshilo, kodwa inokulibaziseka kwiiveki ezimbalwa. Yiba njalo, Yimpawu elungileyo, intshukumo iphakamisa ukuba iAmazon ifuna ukukhuthaza ukuhanjiswa kwevidiyo kunokuba ithengise izixhobo zayo. Nangona kuyinyani oko Izixhobo zikaGoogle zeChromecast, okwangoku ayixhasi iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon, isalahlekile. Cinga ngale njengenyathelo eliya phambili, kunokuba uphele ngesaga ende.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Emva kweminyaka embalwa elubhacweni, iApple TV ibuyela eAmazon
izixhobo ezingaphezulu sitsho
Zimnandi iindaba zokubukela ividiyo ephambili yeAmazon kwiApple tv
Phendula kwizixhobo ezingaphezulu
UJose Alfocea sitsho
Ndivuma ngokupheleleyo. Kwakhona, leyo yokurhoxisa imveliso okanye ungayithengisi ngenxa yokuba ungayiphuhlisanga i-app yayo, kubonakala ngathi iyinto embi hahaha.
Phendula kuJose Alfocea
IiTV ezilungileyo zika-2016